Kedu ngwa kacha mma maka ịzụta cryptocurrencies? - Cazoo
Mbido » Mbido » Kedu ngwa kacha mma maka ịzụta cryptocurrencies?
Tag: Binance, Binance ngwa, Binance gam akporo App, Binance iPhone App, Ntughari Binance, Binance Ntuziaka ID, Binance Ntuziaka Usoro, Ntuziaka Code
Ọ bụrụ na ịnọghị n'ụlọ wee chọọ ijikwa itinye ego gị na itinye ego cryptocurrency n'ọdịnihu, ị ga-achọ angwa iji zụta ma ree cryptocurrencies a ga-eji site na ekwentị gị. Kedu ihe ọ pụtara ịzụta cryptocurrency? Site na ego anụ ahụ gị ị nwere ike ịzụta ego mebere (Bitcoin, Dogecoin, wdg), ego cryptographic nke uru mkpebi siri ike kpebisiri ike, nke na-eme ya Ahịa. Ọ bụrụ na ọnụahịa nke cryptocurrency ịzụrụ na-abawanye, ị nwere ike ịrepụ cryptocurrency maka uru agbakwunyere, wee laghachi na itinye ego gị na ego karịa nke mbụ.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-agụ ahịrị ndị a, ọ dị mma izute gị.
N'ebe a, anyị na-agwa Cazoo okwu banyere ụwa nke crypto, na-ekerịta ihe edeturu na mkpirisi na weebụ. Ọ bụ ihe ọzọ iji eme ya na mkpịsị odee na akwụkwọ, ọ na-enye m ohere inyere ndị dị ka m aka, ka m na-achọpụta etu ụwa a si arụ ọrụ, nyochara weebụ na olile anya nke ịchọta onye ga-ekwu okwu. na-a drinkingụ mmanya.
Ekwesiri ighota na itinye ego na cryptocurrencies di egwu, nihi na ị ga-enwerịrị ọzụzụ bụ isi ịkọwa eserese na mgbanwe. Ọzọkwa, isi obodo gị nwere ike itinye n'ihe egwu ma ọ bụrụ uru nke cryptocurrency ị zụrụ dara. Abụghị m onye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara ego, agaghị m enye gị ndụmọdụ ka esi emefu ego gị. Nne nne, onye tinyere ego n'okpuru akwa ụra, adabaghị. N’aka nke ọzọ, ànyị ji n’aka na a pụrụ ịtụkwasị obi ụlọ akụ? Emehiela ihe m kwuru, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ekwu maka ndụmọdụ - mee nyocha gị.
Ka anyị laghachikwute anyị. Want chọrọ ịzụta cryptocurrency. I zuta ya ma ya adaa .. gini kpatara o ji daba? Enwere ọtụtụ ebumnuche, ndị bụ isi bụ: n'ihi na ọtụtụ ego na-agba ọsọ (yabụ ọ na-erughị ala), a chọghịzi ya (yabụ enweghị mkpa), n'ihi ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị (dịka ọ na-emekwa maka itinye ego na ego nkịtị) ma ọ bụ maka nkwụsị, nke anaghị ekwe ka nyocha ziri ezi nke ahịa ahụ.
Otu ihe nwere ike inyere gị aka bụ ịgbaso ahịa na ekwentị gị. Need chọrọ ngwa kacha mma iji zụta cryptocurrencies inwe ike inyocha ego gị na ịchọpụta ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma ọbụlagodi na ịnọghị n'ihu PC. Ihe ngwọta kasịnụ bụ Binance.
Denye aha na ego NA-EGO 20%
Ngwa kacha mma iji zụta cryptocurrencies
Na ngwa Binance ọ dị mfe ịzụta cryptocurrencies ị nwere ike itinye ego na nchekwa ka ukwuu. N'ezie, iru nke gam akporo ekwentị ma ọ bụ iPhone, ị nwere ike ịnweta data niile na cryptocurrency ị zụtara na ndị ọzọ dị. na ozugbo.
Ngwa dị na Binance ukara website na ukara Play Store maka gam akporo na App Store maka iPhone. A nwekwara ike iji ya na mbadamba na iPads, dabere na sistemụ arụmọrụ ị na-eji, na-ebudata mgbe niile site na ụlọ ọrụ gọọmentị. Na mgbakwunye, a na-ejikọta ngwa ahụ na ikpo okwu mgbanwe nke Binance. Nke a pụtara na, ọ bụrụ na ị debanyere aha na saịtị ahụ, i nwere ike iji otu nzere na ngwa.
Mgbe ị na-etinye ego na cryptocurrencies, otu n'ime ihe egwu ị na-eche bụ nke nweta falsified data ruru ka a hacking agha ma ọ bụ a oru nsogbu. Na ngwa Binance, a na-ewepụ ihe ize ndụ a! N'ezie, na mgbakwunye na nlekota oge niile site na ikpo okwu mgbanwe, ngwa ahụ dịkwa nchebe zuru oke ma na-ekwe nkwa nzuzo zuru oke, jupụta obere akpa ka ejikwa ya na profaịlụ gị maka mgbanwe mgbanwe cryptocurrency.
Ngwa ahụ dị mma dị ka ikpo okwu mgbanwe, ma o nwekwara otu ọrụ. Gaghị akwụ ụgwọ karịa n'ihi na ị na-ejikwa ihe niile site na ngwa ahụ. Ọrụ ahụ bụ 0,2% nke ego a na-akwaga. Want chọrọ inwe 20% ego na ndị a isslọrụ maka ahia ọ bụla ị ga - eme? Debanye aha na njikọ njikọ m https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5!
Kedu ihe bụ Binance
Binance bụ mgbanwe n'elu ikpo okwu maka zụta ma ree cryptocurrencies. N'ime, a na-eji ego anụ ahụ naanị ịmalite na ịdọrọ, mana arụmọrụ na-arụ site na cryptocurrency.
Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịmepụta cryptocurrency ha na Binance, na-eji usoro ICO dị n'elu ikpo okwu. Na mmemme mmalite mmalite na-eme ka o kwe omume iru ọhụụ cryptocurrencies ọhụụ.
Ihe a niile dịkwa na ngwa ahụ. Imepe akaụntụ na ngwa kacha mma iji zụta cryptocurrencies, dị nnọọ gaa na ngwa ma họrọ "Deba aha" nhọrọ. Site na ijuputa ubi achọrọ ịbanye na ịnakwere usoro na ọnọdụ nke ọrụ ahụ (ma tinye njikọ ntinye aka EV6X8DW5 iji nweta ego. Ma na m ekwuworị nke ahụ?). Ga-enweta koodu site na email, nke ị ga - idetuo na mado na ngwa ahụ iji nyochaa na ọ bụ gị debanyere aha. N'oge a, ị ga-enwe ike ịnweta profaịlụ gị na nzere ịbanye mgbe ị debanyere aha.
Binance, ịbụ a centralized Exchange, na-arịọ maka amata akwụkwọ na-ekwe nkwa na nzuzo gị na iji chebe gị onwe onye data. Yabụ, ikpo okwu nwere nkwenye na ị ga-agbaso iwu maka ahịa (dịka ịbụ afọ dịka ọmụmaatụ) yana na ọ bụ gị na-azụ ahịa na akaụntụ gị. Naanị nseta ihuenyo nke akwụkwọ njirimara na nkwenye na usoro nyocha ihu ihu dị elu na usoro ahụ ga-ezu.
Iji jikọọ obere akpa gị na akaụntụ gị wee si otú a bido itinye ego na ngwa cryptocurrency, gaa na akaụntụ gị mgbe ịbanyechara. Thezọ ịkwụ ụgwọ a nabatara site na ikpo okwu bụ:
usoro ịkwụ ụgwọ nke atọ.
Mkpụrụ ego kachasị mkpa dị na ngwa Binance bụ:
Ego Bitcoin (BCH);
Igwe kpakpando (XLM);
Ihe omuma (ONT);
Na mkpokọta, enwere cryptocurrencies 500. Iji mee ka nchekwa nke akaụntụ gị dịkwuo elu, ị nwere ike ịrịọ maka nyocha abụọ abụọ abụọ, m na-adụkwa gị ọdụ ime otú ahụ. Mee ya mgbe niile, ọbụlagodi mgbe ị debanyere aha na Amazon! Site na nyocha abuo abuo, mgbe okwuntughe i gha enwe koodu nke abuo iba, nke a ga-eziga na smartphone gi, tupu ịbanye, ma obu nke ị gha eweputa site na ngwa ngwa koodu dika Google Authenticator. Ee e ma ọ dị njọ, ọbụlagodi na Netflix! N'ebe nile!
Kedu otu, site na akaụntụ ahụ n'ime Binance App ị nwere ike ịlele akụkọ banyere azụmahịa niile nke ịzụta cryptocurrency na nke metụtara nkwụnye ego niile. Binance anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla, ma na ngwa ma ọ bụ na weebụsaịtị.
Iji malite na ngwa kacha mma iji zụta cryptocurrencies, ị dị nnọọ nwere deba aha, wee budata Binance site na ụlọ ọrụ gọọmentị wee banye n'ụwa a, n'oge ọhụụ ọhụụ a.
Isiokwu bu nke aBinance: Nyefee kredit ozugbo na nnyefe waya SEPA
Isiokwu ọzọEnyemaka bọọlụ: gbanye fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD na Binance